Madaarka Frankfurt Weli Saamayn Ayaa Ku Yeelatay Hoos U Dhaca Rakaabka
Bogga ugu weyn » Maqaallada Wararkii Ugu Dambeeyay » Airlines » Madaarka Frankfurt Weli Saamayn Ayaa Ku Yeelatay Hoos U Dhaca Rakaabka
Airlines • Airport • Jebinta Wararka Yurub • Safarka Ganacsiga • Jarmalka Jebinta Wararka • News • Ogeysiisyada Saxaafadda • Gaadiidka • Warka Safarka Safarka • Wararka kala duwan
Kooxda Fraport: Dakhliga iyo faa iidada ayaa si aad ah hoos ugu dhacay iyada oo ay jirto CUDUR-19 faafa sagaalkii bilood ee ugu horreeyay 2020
Madaarka Frankfurt wuxuu ku guuleystaa sii wadida kororka xamuulka culus - Hoos u dhaca taraafikada ayaa la soo sheegayaa inta badan garoomada diyaaradaha ee kooxda adduunka. Jaantusyada Gaadiidka Fraport - Febraayo 2021:
Bishii Febraayo 2021, Madaarka Frankfurt (FRA) wuxuu u adeegay 681,845 rakaab ah - hoos u dhac ah boqolkiiba 84.4 marka loo eego isla bishii la soo dhaafay. Rakaabka rakaabka ee FRA labadii bilood ee ugu horeysay sanadka ayaa hoos u dhacay boqolkiiba 82.6 sanadkii. Dalabkan hooseeya ayaa wali ka dhashay xayiraadaha socdaalka ee socda iyadoo uu jiro aafada Covid-19.
Taa bedelkeeda, soo dejinta xamuulka (airfreight + airmail) ayaa kor u kacday 21.7 boqolkiiba ilaa 180,725 metric tons bishii warbixinta - in kasta oo ay jirto yaraanta awoodda caloosha ee sida caadiga ah ay bixiso diyaaradaha rakaabka. Thanks to koritaankan adag, Madaarka Frankfurt wuxuu diiwaangaliyay bishii ugu badnayd bishii Febraayo abid. Dhaqdhaqaaqa diyaaradaha ayaa hoos u dhacay boqolkiiba 69.0 illaa 11,122 oo duullimaad iyo soo degis ah, halka urursiga culeyska qaadashada ugu badan (MTOWs) uu qandaraaska ku dhacay 56.7 boqolkiiba ilaa 961,684 metric tons sanadkiiba sanadka.
Garoomada diyaaradaha ee ku yaal galka caalamiga ah ee Fraport waxay sii wadeen inay soo bandhigaan natiijooyin isku dhafan bishii Febraayo 2021, iyadoo waxqabadka taraafikada uu kuxiranyahay inta badan xaalada aafada ee gobolka. Dhammaan garoomada diyaaradaha ee Fraport ee adduunka oo dhan - marka laga reebo Xi'an oo ku taal Shiinaha - hoos u dhaca taraafikada ayaa la diiwaan geliyey marka loo eego Febraayo 2020.
Gudaha Slovenia, Ljubljana Airport (LJU) waxay arkeen hoos u dhaca taraafikada ee 93.1 boqolkiiba sanadkii ilaa 5,534 rakaab ah inta lagu gudajiray bishii Febraayo 2021. Labada garoon diyaaradeed ee reer Brazil ee Fortaleza (FOR) iyo Porto Alegre (POA) waxay diiwaangeliyeen taraafikada 553,336, hoos 54.6 boqolkiiba. Gadiidka garoonka diyaaradaha Lima ee dalka Peru (LIM) ayaa hoos udhacay boqolkiiba 83.9 boqolkiiba 320,850 oo safar ah.
Wadarta tirada taraafikada ee 14-ka garoon ee Griiga ayaa hoos u dhacday 84.1 boqolkiiba rakaabkii ahaa 93,813 bishii Febraayo 2021. Xeebta Bulgaariya ee Badda Madow, garoomada diyaaradaha ee Twin Star ee Burgas (BOJ) iyo Varna (VAR) waxay si wada jir ah u heleen 16,914 rakaab ah, hoos udhaca 77.6 boqolkiiba sanadkii. -sanad. Gadiidka garoonka diyaaradaha ee Antalya (AYT) ee dalka Turkiga ayaa hoos u dhacay 64.8 boqolkiiba rakaab gaaraya 292,690. Madaarka Pulkovo (LED) ee ku yaal magaalada St. Petersburg ee dalka Ruushka ayaa soo dhoweeyay 716,739 rakaab ah, taas oo hoos u dhacday boqolkiiba 38.9. Garoonka diyaaradaha ee kooxda kaliya ee diiwaan geliyay kororka taraafikada wuxuu ahaa Xi'an Airport (XIY) ee Shiinaha. Gaadiidka XIY ayaa si muuqata dib ugu soo laabtay bishii warbixinta, kor u kaca 272.2 boqolkiiba in ka badan 1.7 milyan rakaab ah marka la barbar dhigo Febraayo 2020 - markii Shiinuhu horayba u saameeyay aafada Covid-19.